भीमदत्तमा नगरपालिकामा मेयर टोलटोल आधारभूत स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम सुरू - Everest Dainik - News from Nepal
भीमदत्तमा नगरपालिकामा मेयर टोलटोल आधारभूत स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम सुरू
महेन्द्रनगरः कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाले कोरोना भाइरस (कोभिड १९) लाई मध्यजनर गरी मेयर टोल टोल आधारभूत स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । भीमदत्त नगरपालिकाका सबै वडामा सञ्चालन हुने कार्यक्रम वडा नं. २ बाट सुरू गरिएको छ ।
कोरोना सम्बन्धि परामर्श, स्क्रिनिङ्ग र दीर्घ रोगीहरुलाई लक्षित गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । सबै वडाका तीन तीन स्थानमा सञ्चालन गरिने कार्यक्रम सामाजिक दुरी कायम गरी सञ्चालन गरिएको आधारभूत स्वास्थ्य तथा सरसफाई उप शाखाका फार्मेसी सहायक जीवन साउँदले बताए ।
‘हाल महामारीको रुपमा रहेको कोरोना रोग सम्बन्धी परामर्श र स्क्रिनिङ का साथै दीर्घ रोगीहरूलाई लक्षित गरी सबै वडामा सञ्चालन गर्ने लक्ष्य सहित मेयर टोल टोल आधारभूत स्वास्थ्य कार्यक्रम सुरू गरिएको छ’ फार्मेसी सहायक साउँदले भने ।
कार्यक्रमको पहिलो दिन वडा नं. २ का तीन सय ६३ वासिन्दालाई सेवा प्रदान गरिएको छ । वडाका तीन स्थानमा स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिएको छ । शिविरमा स्वास्थ्य जाँचपछि औषधि पनि वितरण गरिएको छ । बिहीबार भीनपा १ मा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ ।
याे पनि पढ्नुस स्थानीय सभाः सवाल छान्दै समाधान
वडा नं. १ मा २ सय २४ जनालाई सेवा प्रदान गरिएको छ । भीमदत्त नगरपालिकाले गत वासिन्दाको स्वास्थ्यमा पहुँच पुगाउन गत वर्ष स्थापना दिवसको अवसर पारी मेयर स्वास्थ्य शिविर कार्यक्रम समेत सञ्चालन गरेको थियो ।
कोरोना भाइरस महामारीपछि नगरपालिकाले नगर क्षेत्रका दीर्घरोगी, अशक्त, ज्येष्ठ नागरिक र सुत्केरी महिलालाई सेवा पुग्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ ।
याे पनि पढ्नुस कञ्चनपुरमा जंगली बँदेलको आक्रमणबाट ४ जना घाइते
ट्याग्स: कञ्चनपुर, भीमदत्तमा नगरपालिका, स्वास्थ्य सेवा